Shir xasaasi ah oo maalinta berri ah Muqdisho ku yeelan doonno madaxda madasha Qaran – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shir xasaasi ah oo maalinta berri ah Muqdisho ku yeelan doonno madaxda madasha Qaran
Waxaa maalinta berri ah la filayaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay kulan ku yeeshaan hogaamiyaasha madasha Qaran, kaas oo looga hadli doonno arrimaha colaadda soo noq-noqoday ee u dhaxeeysa Puntland iyo Galmudug.
Shirkaasi ayaa sidoo kale looga hadli doonnaa arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan tan Aqalka Sare oo haatan howsheedii bilaabatay, inkastoo qaar ka mid ah maamul goboleedyadda dalka aysan weli soo gudbin liiska musharixiinta uga qeyb galeysa Aqalka Sare.
Dhinaca kale, hogaamiyaasha maamul goboleedyadda dalka ayaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta ay soo gaaraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, si ay uga qeyb-galaan shirkaan maalinta berri ah furmi doonna.
Sidoo kale, ammaanka magaalada Muqdisho ayaa ah mid si weyn loo adkeeyay, waxaana waxyaabaha ugu weyn ee shirkaasi diiradda lagu saari doonno ka mid ah sidii laga yeeli lahaa colaadda u dhaxeeysa Puntland iyo Galmudug iyo sidoo kale arrimaha amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan.
Si kastaba ha ahaatee, maalintii shalay ayay ahayd markii madaxda madasha qaran ay baaq culus kasoo saareen dagaalada iyo colaadda soo noq-noqodka ah ee u dhaxeeysa maamulada Puntland iyo Galmudug, taas oo saameyn ku yeeli karta dadaalada doorashooyinka dalka.